श्रीमान अक्षयप्रति ट्विंकलको यस्तो छ गुनासो ! - Everest Dainik - News from Nepal
श्रीमान अक्षयप्रति ट्विंकलको यस्तो छ गुनासो !
मुम्बई, भदौ २६ । बलिउडका धेरै अभिनेत्रीहरु विवाहपछि पनि चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय भइरहेका छन् ।
तर, चर्चित अभिनेत्री ट्विंकल खन्नाले भने विवाहपछि चलचित्रबाट टाढा भइन् । हालै एक कार्यक्रममा ट्विंकलले श्रीमानका कारण बिहेपछि चलचित्र खेल्न नपाएको गुनासो गरिन् । ट्विंकलका अनुसार अक्षयले कहिले पनि उनको अभिनयको तारिफ गरेनन् ।
‘उनी सँधै मेरो अभिनयको मजाक उडाउने गर्थे,’ उनले भनिन्, ‘विवाहपछि चलचित्र खेल्ने चाहना भएपनि उनले अनुमति दिएनन् ।’ त्यसो त बिहेअघि पनि ट्विंकलको करिअर खासै सफल थिएन । उनले अभिनय गरेका अधिकांश फिल्म फ्लप छन् ।
‘अहिले सोच्छु कि म साँच्चै राम्रो अभिनय गर्दिन, सायद अक्षयले ठिकै भनेका थिए,’ ट्विंकले भनिन् । अभिनयमा सक्रिय नभएकी ट्विंकल बरु लेखनमा सक्रिय छिन् । हालैमात्र उनको नयाँ पुस्तक आएको छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि मनमा लागेका कुराहरु ओकलिरहन्छिन् । र, बेलाबखत विवादमा पनि पर्ने गर्छिन् ।
याे पनि पढ्नुस चर्चित भारतीय चलचित्र निर्देशक शाहको निधन
ट्याग्स: akhshaya kumar, bollywood, twinkle khanna